Raha ny hazandrano trondro fanjonoana dia nanimba ny fahasimban'ny karazan-trondro natiora, ref Ireo trondro an-dranomasina dia tsy dia mahazatra loatra ary ny vokany ekolojika dia tsy fantatra loatra. Ny fampisehoana ny Aquarium sy ny fitaterana baomba ny rano dia ireo làlana roa azo inoana indrindra amin'ny fampidirana trondro an-dranomasina tropikaly any Karaiba ary mety ho làlana mitovy amin'ny faritra hafa ihany koa. ref
Nandritra ny taona maromaro lasa izay, ny tombontsoa amin'ny fiantraikan'ny trondro an-dranomasina dia mitombo be noho ny fampidirana karazam-bibidia roa mifanakaiky amin'ny ramanavy.Paterois volitans ary P. miles) avy amin'ny toerana niaviany tany Indo-Pasifika mankany amin'ny Atlantika Andrefana. Na dia tsy fantatra mazava aza hoe ahoana no nampidirana ny lefona, dia ny fikarohana dia manondro fa ny liona tsirairay dia navotsotra tao amin'ny akrarium iray nandritra ny Rivo-doza Andrew tao amin'ny 1992. ref
Lionfish any Palm Beach, Florida. Sary © Chip Baumberger / Marine Fotobank
Hatramin'ny nanafahana azy ireo dia niparitaka haingana avy any Florida ny leoparda manerana an'i Etazonia atsinanana sy atsimo mankany Karaiba. ref Ny isam-ponina dia 313 mponina araka ny fanisana natao tamin'ny taona 2008. Ny fisiana ara-daharampehintany ary ara-kaominina ny isam-ponina. ref
Ny fikarohana natao vao haingana dia manasongadina ny fiantraikan'ny liona mpanafika amin'ny tontolo iainana haran-dranomasina any amin'ny faritr'i Karaiba. Ny fiatraikany toy izany dia ahitana ny fihenan'ny fahaveloman'ny biby teratany haran-dranomasina noho ny fiaingana sy ny fifaninanana, izay mampihena ny fahombiazan'ny fandraisana mpiasa amin'ny trondro haran-dranomasina.ref
Ny lionfish dia manana karazam-borona voajanahary ao amin'ny faritra misy azy, ka noho izany dia misy karazam-borona Atlantika sy Karaiba vitsivitsy izay mety ho toy ny biby goavambe manan-danja amin'ny liona. ref Any Karaiba sy Atlantika, ireo biby mpihinam-borona voajanahary, toy ny mpamboly, dia tafahoatra ary tsy azo atao ny mampihena ny isan'ny popola ary ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana.
Soso-kevitra momba ny trondro an-dranomasina hafa
Ilay mpiompy poti-tany, Cephalopholis argus (roi), any Hawai'i. Ity mpandroba ity dia nanjary mpihaza mahery amin'ny haran-dranomasina sasany any Hawai'i. Sary © Chad Wiggins
Trondro an-dranomasina efatra amby telopolo no nampidirina tao anaty rano Hawaiiana ary saika ny 60% tamin'ireo no nanjary natsangana. ref Amin'ireo trondro marine nampidirina, ny 40% dia efa nampidirina an-tsokosoko ho trondro sakafo, trondro baobaba, na fitiliana tavy, ref anisan'izany trondro an-dranomasina telo natolotry ny Fanjakana ho trondro sakafo: Ta'ape (Lutjanus kasmira/ blueline snapper)Lutjanus fulvus/ blacktail snapper) sy roi (Cephalopholis argus/ pao grouper).
Ny mpikaroka sy ny mpanjono sasantsasany dia manoro hevitra fa ny fampidirana ireo karazana ireo dia nahatonga ny fihenan'ny fatran'ny trondro sy ny trondro misy karazan-trondro hafa manan-danja hafa. Raha ny fandalinana natao hatramin'izao dia tsy nahavita nametraka fiantraikany mahery vaika momba ny fambolena natanjaka tany Hawai'i amin'ny fampidirana ireo karazana ireo, ref Mbola misy adihevitra miely hatrany amin'ity olana ity. Ho setrin'izany, ny National Conservancy and the University of Hawai'i dia mitarika fanandramana "fanesorana roi" amin'izao fotoana izao, izay nesorin'ny roi mananontanona rehetra avy amin'ny karazana harambato ao amin'ny nosy Hawai'i ary ny valin'ny fiaraha-monina trondro dia natsangana amin'ny fotoana (jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovao vokatra).
Ny sekolin'ny tetikasa blueline (snapper)Lutjanus kasmira/ Ta'ape) any Hawai'i. Sary © Ed Robinson
Karazam-bolo maro hafa no nampidirina tao Hawai'i, anisan'izany tilapia (Oreochromis mossambicus), sardine (Sardinella marquesensis), mullet (Valamugil engeli) sy goatfish (Upeneus vittatus). Ny fiantraikany ara-tontolo iainan'ireny karazan-javamaniry any Hawai'i na ny tontolo iainana amoron-dranomasina sy ny zavamananaina an-dranomasina dia tsy fantatra, na dia mety hivezivezy aza ny mullet (Mugil cephalus) ao amin'ny trano sasany. ref
Fiantraikany ara-tontolo iainana sy sosialy
Vitsy ny fanadihadiana no nanombantombana ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy sosialy ara-ekonomika amin'ny trondro an-dranomasina invasive sy ny fikarohana izay notontosaina voalohany indrindra amin'ny faritra maraokana raha oharina amin'ny faritra tropikaly. ref Ny fijerena ireo fiantraikany, fa tsy mifanaraka fotsiny amin'ny fandraketana fotsiny ny fisiany, ny habetsahana sy ny fizarana karazana toy izany dia loharano fikarakarana maika.
Ny fiantraikany ara-tontolo iainana amin'ny trondro an-dranomasina dia mampihena ny fahaveloman'ny biby an-tanety avy amin'ny biby noho ny fandrobana sy ny fifaninanana, ny fihenan'ny fahombiazana amin'ny trondro voajanahary natiora, ary ny mety hampihenana ny habetsaky ny karazan-javamaniry manan-danja (ohatra ny herbivores) izay tena ilaina hanohanana ny harambato faharetana amin'ny fisorohana ny alka mandevona ny haran-dranomasina.
Ny fiantraikan'ny soka-ekonomika eo amin'ny trondro an-dranomasina dia ahitana ny fandaniana mifandraika amin'ny ady, ny fifehezana ary ny famongorana ny karazan'antoka, ary ny fihenan-tsakafo amin'ny fisian'ny trondro natiora.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Coral Reef Information System - Lionfish Invasionmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fanehoan-kevitr'i Karaiba momba ny fanafihan'ny lionfish (horonan-taratasy mankany amin'ny pejy voalohany ho an'ny PPTs ho an'ny firenena tsirairay ao Karaiba mifandraika amin'ny sata sy fitantanana ny lionfish)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSt. Eustatius National Park: Lionfish Response Plan manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSt. Lothian Nature Foundation Foundation Lionfish Response Planmanokatra fisie PDF